सप्तरीमा पनि फेला प¥यो डेंगुका एक बिरामी, एकको पुष्टि, अर्को दुईको परिक्षण हुँदै
सप्तरी जिल्लामा पनि डेंगुका रोगि भेटिएको छ । राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका लागि आएका एक ६० वर्षिय बृद्धमा डेंगु रोग भेटिएको हो ।
यसैगरि आइतबारै उपचारका लागि राजविराजस्थित एक निजि क्लिनिकमा आएकी एक महिला र एक पुरुषमा पनि डेंगु रोगको लक्षण देखिएको सम्बद्ध क्लििनिकका संचालकले जानकारी दिएका छन् । यद्धपी उनहरुको रगत परिक्षण गर्ने कार्य जारि रहेकाले डेंगु भए÷नभएको बारे परिक्षण पश्चात् मात्र सार्वजनिक गर्ने ती क्लिनिकका संचालकले बताएका छन् ।
यता उपचारका लागि आएका कंचनरुप नगरपालिका बैरवाका ६० वर्षिय राजेन्द्र पंजियारको रगत परिक्षण गर्दा डेंगु रोगको पुष्टि भएपछि प्रारम्भिक उपचार गरेर थप उपचारका लागि बिराटनगरस्थित कोशी अंचल अस्पताल पठाइएको डा. रविरंजन प्रधानले जानकारी दिए ।
उपचारका लागि आएका पंजियारको डा. प्रधान र डा. रन्जित झाले प्रारम्भिक उपचार गरेका थिए । तर, उनलाई थप उपचार आवश्यक परेको तथा बिराटनगरस्थित कोशी अंचल अस्पतालमा डेंगु रोग उपचारको उपकरण र औषधीसहितको विशेषज्ञ टोली उपलब्ध रहेकाले त्यसतर्फ पठाइएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
यसअघि उपचारका लागि धरान र बिराटनगर पुगेका सप्तरीको दुई जना बिरामीमा पनि डेंगु रोग देखिएको जानकारी प्राप्त भएको अस्पताल श्रोतले जनाएको छ ।
उच्च ज्वरो आउने, टाउँको दुख्ने, जिउ दुख्ने, चिलाउने, घाँटी खसखस गर्ने, आँखा रातो हुने लगायतका लक्षण डेंगु रोगतर्फ संकेत गर्ने बताउँदै डा. प्रधानले लामखुट्टेको प्रकोपबाट जोगिन तथा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन सर्वसाधारणलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।